खराब रोडमा सजिलै कुद्ने सफल ३ कम्प्याक्ट एसयुभी, यस्तो छ बिशेषता – Etajakhabar
शुक्रबार, बैशाख ०६, २०७६ | Friday, Apr 19, 2019
खराब रोडमा सजिलै कुद्ने सफल ३ कम्प्याक्ट एसयुभी, यस्तो छ बिशेषता
काठमाडौं: भारतमा पनि सडकको अवस्था उत्कृष्ट हुन सकेको बताइन्छ । खराब अवस्थाको सडकमा गाडी गुडाउनु त्यति सहज छैन, त्यो यात्रुका लागि पनि र गाडीका लागि पनि । त्यसमा पनि कारका लागि त त्यो झनै खतरनाक हुन्छ ।
यद्यपी त्यस्तै खराब सडकहरुमा पनि आरामदायी तवरमा गुडेका एसयुभीको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । ७ देखि ८ लाख भारुमा पाइने त्यस्ता कम्प्याक्ट एसयुभीको ग्रान्ड क्लियरेन्स २ सय एमएम भन्दा बढी रहेको छ । ती कारहरु यस प्रकार छन्ः
भारतीय बजारमा फोर्ड इकोस्पोर्ट कम्पनीको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने कार हो । यो कार हाइवे तथा सहरी यात्रा दुवैका लागि उपयुक्त मानिन्छ । २०१८ मा फोर्डले नयाँ जेनेरेसनको इकोस्पोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । इकोस्पोर्टको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २ सय एमएम र ह्वील वेस १६ इन्च रहेको छ । नयाँ इकोस्पोर्टमा १४ सय ९७ सीसीको शक्तिशाली इन्जिन रहेको छ । मूल्यः ७ लाख ८२ हजार भारु (सुरुवाती) इन्जिनः १४९७ सीसी पावरः १२३ पीएस टर्कः १५० एनएम माइलेजः १७ केएमपीएल
फियाट एभेन्चुरा केही पावरफुल क्रसओभर हो । एभेन्चुराको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २ सय ५ एमएम रहेको छ भने ह्वील वेस १६ इन्च । एडभान्स सस्पेन्सन भएको एभेन्चुरा इटाइलिस गाडी हो । १.४ लिटर टी–जेट इन्जिन भएको यो गाडी सबै खाले सडकमा सहज गुडाउन सकिन्छ ।
मूल्यः ७ लाख ११ हजार भारु (सुरुवाती) इन्जिनः १.४ लिटर टी–जेट पावरः १४० बीएचपी टर्कः २१० एनमए
रेनो डस्टर भारतीय बजारमा निक्कै चर्चित रहेको छ । कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्टको यो गाडी खराब सडकमा पनि सजिनै गुडाउन सकिन्छ । यो कार डिजेल तथा पेट्रोल दुवै भेरियन्टमा उपलब्ध छ । डस्टरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २ सय १० एमएम रहेको छ ।
मूल्यः ७ लाख ९५ हजार भारु (सुरुवाती) इन्जिनः १.५ एचफोरके पेट्रोल र १.५ डीसीआइ डिजेल पावरः १०६ पीएस पेट्रोल र ८५ पीएस डिजेल
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २५, २०७५ समय: १३:००:१८
मेलामै फेला पर्यो विस्फोटक पदार्थ सहितको झोला
विप्लवको बन्द छल्दै पत्नीको मन बहलाउन सुकुटे पुगे प्रचण्ड
व्यापारीको ‘ठगी’ बारे समाचार लेख्दा पक्राउ परेका पत्रकार गिरी रिहा
एक युवक टाउकोमा गहिरो चोट लागेको अवस्थामा मृत फेला , हत्याको आशंका
पोखरामा ६० वर्षिय महिलाले बम छाडेर हिडेपछि स्थानिय त्रसित , बारुद पड्केर एक जना घाइते (भिडियो)
बिप्लप नेतृत्वको नेकपाले बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै स्कुल बसमा गर्यो आगजनी
यू–१९ विश्वकप एसिया छनोटमा नेपालले कुवेतलाई हरायो
५०० रुपैयाको प्रलोभन देखाएर कसैलाई नभन्नु भन्दै बालिकामाथि बलात्कार
मामाघर जानेक्रममा एक बालक कर्णाली नदीमा डुबेर बेपत्ता
हे भगवान..कस्तो दुर्दशा ! कृष्ण वलिको जस्तै रुपाको पनि करेन्ट लागेर दुवै हात काटियो (भिडियो हेर्नुस)
स्वस्तिकाको मिर्त्यु रहस्यमय बन्दै,न्याय माग्दा माग्दै स्वस्तिकाको आमा परिन बेहोस(भिडियो)
विप्लव समूहद्वारा दुईवटा गाडीमा पेट्रोल छर्किएर आगजनी , गाडी पूर्ण रुपमा क्षति
भीषण वर्षा असिनासँगै आएको हुरी र चट्याङले ३५ जनाको ज्यान गयो , ४० भन्दा बढी घाइते
सामाजिक संजालमा एकै दिनमा भाइरल भएकी २ वर्षीया सैलिन सहित परिवार पहिलोपटक मिडियामा,अन्तरजातीयबिहे गर्दा छोरी झनै ट्यालेन्ट(हेर्नुहोस)
बेलायती नागरिक फिलिपको पैसाको बिषयमा फेरी अस्पतालमा क्रिष्टिना र पत्रकार बीच हात हालाहाल-हेर्नेहरु भागाभाग
यो कमेडी टिकटक भिडियो हेरेपछी तपाइले हासो रोक्न सक्नुहुन्न - भिडियो
सात वटै प्रदेशमा फोर जी सेवा विस्तार गर्दै नेपाल टेलिकम
चर्चित गायिका मेलिना राईको नयाँ गीत ‘हेरन कान्छी’ मा आशिफ र रेश्माको रोमान्स (भिडियो)
१४ जनाको विभत्स हत्या : बसमा सवार यात्रुहरुलाई बसबाट ओरालेर भटाभट गोली प्रहार
अभिनेता प्रदीप खड्का फिल्म ‘कबड्डी ३’ मा किन नखेल्ने भए ? बाहिरियो यस्तो खबर
५ वर्षकी नानीले यसरी आफै खाइन आफ्नै हातखुट्टा (भिडियो सहित)
चोरी गरी ल्याएको चार लाख ३१ हजार रकमसहित केशव पक्राउ